Usapomera B2B (Email) Mutumwa | Martech Zone
Usapomera B2B (Email) Mutumwa
Chipiri, May 12, 2015 Wednesday, May 13, 2015 Douglas Karr
Mumwe wevatengi vedu akabvunza nhasi kana vachifanira kuenda kune mumwe mupi webasa reemail kure nebasa ravari kushandisa. Takabvunza kuti sei uye vakati vakagamuchira 11% zvakaoma bounce rate pane maemail avakange vatumira. Ivo vakafunga kuti system yakanga yatyorwa nekuti ivo ruoko vakasimbisa kuti mamwe emaemail adhiresi ayo akataura kuti pakanga paine yakaoma bounce vaive vanoshanda vanogamuchira kukambani.
Mune chaiwo mamiriro, a yakakwirira bounce rate inogona kusimudza dzimwe tsiye. Kunyangwe mune ino kesi, tiri kukurudzira mutengi kuti ataure neboka rinoburitsa kune yavo email sevhisi. Nekudaro, iyi haisi yako chaiyo kambani - iyi ikambani inoshanda mumunda weB2B uye maemail kero pane avo ekunyoresa zvinyorwa haisi yako yepakati Gmail kana vamwe vanogamuchira. Iwo makambani makuru anotarisira iwo tsamba mukati.
Uye iye anotipa sevhisi mune ino kesi ane mukurumbira mukurumbira wekugona kwakanaka. Saka hazvina chokwadi kuti pane IP mukurumbira dambudziko nemutumi.
Iyi mamiriro akasiyana pane B2C email kuendesa. Nekuda kwehuwandu hweSSPAM inoyerera ichienda mukushambadzira tsamba dzemakambani, ruzhinji rwemadhipatimendi eIT ane vakaendesa midziyo kana masevhisi ekuramba SPAM. Maitiro evatengi anowanzoenderana nemukurumbira wemutumiri, meseji uye vhoriyamu yeJunk Filter mabhatani kuti aone kana kutumira email kuJunk folda kana kwete. Uye kunyangwe ipapo, iyo email haina kubhurwa - inoendeswa… kungo kune junk folda. Sisitimu dzebhizinesi dzinogona kunge dzisina kana junk dhairekitori kana ivo vanogona kubhowa maemail uye varege kuvabvumidza kupinda!
E-mail yeB2C icharamba ichiendeswa, asi inogona kuendeswa kuJunk Folder. A B2B email; zvisinei, zvinogona kurambwa zvachose. Zvichienderana nebasa kana chishandiso chavari kushandisa kuvhara SPAM, pamwe nezvirongwa zvavakagadzirisa, maemail anogona kurambwa zvichibva nekero ye IP yatumira uye mukurumbira, inogona kurambirwa zvemukati, kana kutorambwa nekuda kwekuti kumhanyisa uye huwandu hwemaimeri ari kuunzwa kubva kune mumwe anotumira.
Muchiitiko cheB2C, iyo email yakagamuchirwa panyama nemhinduro kumashure kune iye anotumira iyo email yakagamuchirwa. Muchiitiko cheB2B, mamwe masisitimu anongoburitsa email zvachose uye nekupa yenhema kodhi kodhi ye zvakaoma bounce.
Mune mamwe mazwi, chigadzirwa chekambani yeB2B chinoramba email nekombodhi yakaoma kudzorera kumashure kuti kero yeemail haipo (kunyangwe ichigona). Izvi, pamwe chete nemitero inowanikwa pamabhizimusi, zvinogona kukwidzirisa mabhureki akaomarara emushandirapamwe weB2B zvakanyanya pamusoro pevhareji yeB2C mushandirapamwe. Uyu mutengi chaiye zvakare mutengi mutekinoroji - saka ivo vanogamuchira kuchengetedzeka uye IT vanhu… vanhu vanofarira kuburitsa chero marongero ekuchengetedza.
Pakupera kwezuva, iyo Email Service Provider haisi kunyepa… ivo vanongotaura kodhi yakatumirwa kudzoka kubva kuseva yevatambi. Nepo akawanda maemail services anogona kuve nenyaya ne IP yavo mukurumbira (iyo iwe yaunogona kuongorora zviri nyore ne250ok), mune iyi nyaya diki asi yakanangwa runyorwa rwevanogamuchira inoita senge iri nyaya kwandiri. Meseji yedu kumutengi wedu:
Usapa mhosva mutumwa!
Kana iwe uri email service provider kana hombe email sender uye uchida kuongorora yako IP mukurumbira, kugadzirisa matambudziko kuburitsa nyaya, kana kuyera yako chaiyo inbox kuiswa, iva nechokwadi chekuratidzira 250okchikuva. Isu tiri mudiwa navo.
Tags: b2b bounce mitengoemail kuburitswazvakaoma bounce
Yako Yekutengesa Inotungamira Tevedzera Up Template
May 13, 2015 pa 5: 13 PM
Chaizvoizvo tora mhinduro yako kumutengi wako, asi wakavapa zano rekuti vaitei semhedzisiro?
May 13, 2015 pa 8: 20 PM
Mhoro Dara! Mubvunzo wakakura, ndinofanira kunge ndaisanganisira!
Ita kuti avo Mupi weEndaneti vaone kuti hapana nyaya nekuendesa uye wozvigadzirisa kana zviripo.
Bata vatengi nemakero eemaimeri akakodzera uye uve nechikwata chavo cheIT kuti vazive kuti nei maemail ari kurambwa.
Ziva kuti kune tani yekudzosera paB2B uye nenyaya dzakaomarara izvo zvisingakwanise kugadziriswa. Ramba uchitumira uye gara uchishingirira kana paine nyaya.